FLM Marseille-Mazargues - Sarimihetsika
BOKY NODORANA NEFA TSY LEVONA: Marsa 1835, namoaka didy Ranavalona I nandrara ny fivavahana. Niafina ny kristiana, Nafenina ny baiboly. Nolefonina toa an-dRasalama, navarina teo Ampahamarinana, nodorana velona, nampinomina tangena….Tovovavy tanora Ranivo. Nisafidy hanaraka ny Tompo ary nivonona ho maritiora. Naharitra 25 taona ny fanenjehana.
ROTA:Nifindra noho ny mosary Elimeleka vadin'ny Noamy. Nanambady tovovavy Moabita ireo zanany, Rota no iray. Taorian’ny nahafatesan’ny vadin’i Naomy sy ny vadiny dia tsy nisaraka tamin’ny rafozany izy ary nanaraka azy nody tany israely. Namoy Andriamanitry ny moabita, ny tanindrazany sy ny finoany. Modely amin’ireo miady mafy amin’ny fiainana.
VAVAHADIN’NY LANITRA SA NY AFON’NY HELO: Tantara mampieritreritra ny anton’ny fiainana sy ny ho avy aorian’ny fahafatesana.
MANDRESY ANDRIAMANITRA Tantara marina momba ny fiainan’ny Pastora Tahilo Gilbert. Tany Androy no niseho ny tantara ny fanombohan’ny fanjanahantany. Nanjaka tanteraka ny finoan-tsampy. Niaina sy nobeazina tanatin’izany ilay zazalahy saingy lasa vavolombelon’ny Tompo sy ny finoana, na nandalo ady sarotra aza.